Kusvira muXhosa ndaenda Capetown – MaXhosa anonaka mhani! – Makuhwa.co.zw
Kusvira muXhosa ndaenda Capetown – MaXhosa anonaka mhani!
Ndakanga ndichangobvawo kupinda mujoni ndakarohwa nezuva remuZimbabwe ndiblack I min black ,worst part ndakanga ndabaya Capetown nyika yemaxhosa nemakaradhi ,zvaiva easy kungonongedzerwa kuti uyo muZimba,becoz of this ndakava munhu aizvidzikisira though ndiri handsome but kahublack kangu kaindimakisa zvekuti dai yanga isiri nhamo ndaisva ndadzokera hangu kuZimbabwe.
Ko ini ndaizivei kuti pane vamwe vaitokwarira mukati kuti dai kamugen’a aka kambondikwadzawo nayo ,(most of them believed kuti dark guys have a big kok). Ko rimwe zuva ndirikutobva zvangu kugraft dip hour, ndichisvika paden ,kamuneighbour kakabva kamhanya zvikanzi “bhuti ndokumbirawo kuvhurirwa door ririkuramba kukiinuka” ndikati rega ndisiye kabag kangu ndirikuuya, ndakabaya, kusvika kungopinza key kudai door raakiinuka , zvikanzi dai matosiya mandichinjirawo padlock yacho because ikunetsa.
Ndakagara zvangu pamutefetefe wecouch ndakamirira padlock itsva yanga yaenda kunotorwa mubedroom ,ndakazoona munhu aakubuda akamonera towel ,aaah !!!! ndiyo padlock yacho here iyi ndakazvibvunza nechemumoyo. Rakasvika ndokundigarira nemazitako raakutondikisa paya ,ndakazongoti rega nditotamba iri kurira ,ndakatanga kudzorera muromo zvekwangu chaizvo, ndichifambisa ruoko rwangu nekubeche rake kudai ranga ratova mukuvisi nekutota, ndakaripidigura kwakuriti iro pasofa kwaakuti katauro kaya uko ,ndakatanga kukisa ndichidzika nemuhuro ,maiweeee ndinzweee munhu yangova ah ah ah uku achikatanura mabuttons eshirt yangu.
Related Topics:Kusvira muXhosa ndaenda Capetown - MaXhosa anonaka mhani
Kusvirwa nemapurisa vandibata ndichihura paRobot – Part 1